Dadaalka iyo daryeelka Xukumadda Somaliland ee hawlaha Qaranku waa qaar lagu qanco!!!!!! | Somaliland.Org
Dadaalka iyo daryeelka Xukumadda Somaliland ee hawlaha Qaranku waa qaar lagu qanco!!!!!!
July 29, 2012	Xukumadda Somaliland ee uu hogaamiyo Axmed Siilaanyo labaddii sanno ee ay jirtey waxay carartay masaafad aad u weyn oo dhinacyadda Arimaha Bulshadda, Siyaasadda iyo Dhaqaalaha intaba laga qabtay wax la dareemi karo oo aad mahiim u ah. Waxaa ugu horaysey in si kalsooni iyo dadaalku dheehantahay loo cadeeyey in dhaqaalaha dalkeennu yahay mid aan kaga bixi karo dhibaatooyinka iyo dayaca jira haddii sidda ay tahay loo bixiyo cashuuraha oo ay inoogu soo xaroodaan si fiican dhakhliga ku xidhan shacabka reer Somaliland ee dhinacyadda kala duwan. Arintaasi iyo tayeynteeddu waxay keentay in Xukumaddu Ciidanka iyo shaqaalaha doorkoodda ahmiyad weyn siisay oo cid walba mudnaanta koowaad laga siiyey iyaga.
Xukumaddu waxay dadaal weyn oo ay si toosa shacabka reer Somaliland u wadda qayb galeen Muxaafad, Mucaarad iyo qaybaha kala duwan ee Bulsha weynta reer Somaliland shirka wadda hadaladda walaalaheenna Somaliyeed iyo garnaqsiga Citiraaf heledda Jamhuuriyadda Somaliland iyo weliba in walaalaheenna Somaliyeed si dhaba u aqoonsadaan doorkeenna Somaliland ahaan, inaga oo ixtiraam, aqaderin, maamuus iyo milgo weyni inaga dhexeeyo oo aan wadaago waxyaabo badan oo aad mahiim u ah, sidda Diinta, Dhalashadda, Dhaqanka, Ehelnimadda iyo waxyaabo badan oo qaderintoodda iyo qaderintoodda markasta leh.
Xukumadda Somaliland waxay si geesinimo iyo wadaniyadi ku dheehantahay ay wax uga qabteen dib u dhiska iyo horumarinta adeegyadda kala duwan ee guud ahaan dalka oo ay ka mid yahaniin dhinacyadda Beeraha oo wadanka laga hirgeliyey Dhaamam, Ceelal iyo Biyo xidhiino iyaddoo kor loo qaadaayo dhinacyadda wax soo saarka iyo dalaga beeraha Jamhuuriyadda Somaliland. Waxay kale oo Xukumaddu waxyaabo badan ka qabatay dhinacyadda Madaaradda, Dekedaha, Wadooyinka iyo guud ahaan dhulka dantadda guud ee Bulshadda reer Somaliland baahiyaha weyn u qabeen, xukumaddu waxay ku guulaysatey in Shirkadda Diyaaradaha ee Ethiopian Airline ay duulimaadyo ka hirgelison wadankeenna, duulimaadyadan oo wax weyn ka taray socdaalka iyo dhinaca gaadiidka circa oo baahi weyni ka jirtey.
Xukumaddu waxay dadaal iyo dagaal weyn ugu jirtaa siddii horumar dhaba looga samayn lahaa dhinacyadda adeegga Bulshadda iyo nidaamka dowladnimo oo maalinba talaabo mahiima hore u qaadno oo wax weyn ka tarta hawlaha iyo nidaamka Qaran looga baahanyahay. Xukumaddu waxay waddaa hawlo badan oo ay ka mid tahay nidaamka Bangiyadda iyo siddii loo diiwaan gelin lahaa lagacteenna oo aan ula xidhiidhi lahayn Baniga Afrika iyo Bangiga aduunka oo lacagteenna iyo nidaamka bangiyadeennu u nqon lahaayeen qaar la aqoonsanyahay oo ka diiwaan gashan dunidda caalamka, taasi oo ay hore u sameeyeen wadamo aan la aqoonsan oo aasiya ku yaala oo awoodda saaray siddii ay wax u qabsan lahaayeen ee nidaamkoodda hawladnimo u dhamaysan lahaayeen Citiraafka hortii. Xukumadda Somaliland waxay isticimaalaysaa Waaya-aragnimo, Aqoon, Nidaam iyo Dadaal aad u balaadhan oo asaliyad iyo wadooyin cad cad oo hore loogu aflaxay loo maraayo. Hadaba diiwaan gelinta lacagteenna laba wadan ayaa inala barya tegidoono oo ku qancin donna Bulshadda Caalamka ee Bangiga Afrika iyo Banigga Aduunka in laynoo diiwaangeliyo lacagteenna iyo doorka Bangiyadeenna midaasi oo Xukumaddu si rasmiya u waddo dadaalka iyo habkii lagu suuragelin lahaa.
Dadaalkeenna iyo doorka dib u dhiska Madaaradda dalkeennu waxuu suuragelin doonaa in Diyaaradaha Caalamiggaa sidda British Airways ay duulimaadyo dhaba ku timaaddo Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan Madaarka Berbera iyo Hargeysaba, marka nabadgelyadda iyo ilaalinta National Security uu noqdo mid 100% aad u sareeya oo taagan heer caalamiya, isla markaasina aan dhaqan gelino agabka iyo aqoonta looga baahanyahay ee dhinaca nabadgelyadda oo ay ku hawl galaan Madaaraddu iyo weliba nidaamyadda laanta Socdaalka iyo laanta Sirdoonka oo kor loo qaado aqoontoodda iyo hawlahoodda shaqo oo maanta taagan heer laysku halayn karo oo mahiima. Dhamaan marka laysku soo xooriyo dadaalka, daryeelka iyo waxqabadka Xukumadda Jamhuuriyadda Somaliland ee ka soo dhex baxday Xisbiga Kulmiye ee taladda dalka shacabkiisu u doortay, waxii u qabsoomay iyo waxa ay ku talo jirto fulintoodda iyo gaadhidooddu waxay noqonayaan dhamaan arimo lagu qanco oo dhinacii la dhowraba qosol iyo qawlal cadayn weyni ku dheehantahay.
Dowladnimadda nidaamkeedda marka laga hadlaayo wax cid gaarii leedahay maha ee waa wadaag iyo wareeg hadaba nin raaci ka yahay oo uu soo doorto, hawl wadeenadda kala duwan ee aqoonta, dadaalka, dadnimadda iyo daryeelka dhabtaa lagu ogyahay, waa masuuliyad weyn oo maalinba uu nin dhengedda u qaado raacinimadda, waanna mid loo baahanyahay in laysku ixtiraamo oo abaal iyo arin laysugu dhigto berito laysku maamuuso oo lagu gaadho danaha iyo doorka dhabtaa ee hogaanka dalka Jamhuuriyadda Somaliland, waayo waxaynu ognahay in Siyaasaddu leedahay maslaxad weyn oo suuragelisa hadafyadda iyo ujeedooyinka guusha mustaqbalka danbe oo mahiimad weyn inoo wadda leh dhamaanteen mahiimad aad u weyn. Markaa waxaan leeyahay ninnowna hayska gaagixin wey dararsantahaye, Siyaasiyiinta reer Somaliland wey isu wadda baahanyahiin oo dalka iyo dadka ayey u baahanyahiin, mana jiro nin keliddii is bixin karaa oo guul iyo gobanimo ku gaadhi kara deegaanka iyo buulkii uu ku dhashay, haddii kaasi jiro waa nin aan Siyaasadda iyo nidaamkeedda u bislaan oo Siyaasiyan aan doob dilaacsan. Siyaasiga hanka leh, waxaa loo baahanyahay in uu iska jiro, luminta kalsoonidda shacabka reer Somaliland guud ahaan, hadalkiisana Siyaasiyan isaga ayaa u haya guusha iyo guuldaradda labadaba. Waxaan aad u danaynayaa in Xukumadda Somaliland ee doorkeeddu cadyahay ka daalin dadaalka iyo daryeelka weyn ee habeen iyo maalinba ay ka geysato qaybaha kala duwan ee dalka iyo dib u dhiskiisa iyo weliba tayeynta shaqaalaha iyo shacabka reer Somaliland oo hela adeegyo hufan oo kala duwan maanta.
Xukumadd iyo shacabkeedaba oo isugu jira Muxaafid iyo Mucaarid waxaan si weyn ugu amaanayaa doorkoodda iyo sidda wadda jirkaa ee looga wadda shaqaynayo danta guud iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland oo ah wax lagu farxo, isku duubnidda ay asaaska u tahay Midnimo, Cadaalad, Sinaan iyo astaan Qaran!!!!!!!
Previous PostDawlada Soomaaliya oo soo Bandhigay Sarkaal iyo askari kasoo goostay Xarakada Al-shabaabNext PostWasaarada Warfaafinta oo u digtay Wargeys Cusub oo aan diwaan-gashanayn	Blog